Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Turkey Breaking News » Nohamafisin'i Torkia ny fameperana COVID ho an'ireo tonga vahiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Ny fanavaozana dia ampiharina amin'ny tolo-bidy hamehezana ny fihanaky ny valanaretina COVID-19 any Torkia, ary hitranga amin'ny sabotsy 4 aogositra izao.
Torkia dia manavao ny fameperana fanoherana ny COVID ho an'ireo tonga vahiny.
Tanjona ny lalàna mba hifehezana ny fihanaky ny valanaretina COVID-19 any Tiorkia.
Napetraka hanan-kery rahampitso ny lalàna nohavaozina.
Ny Minisiteran'ny Atitany ao Torkia dia namoaka boribory androany, nanambara vaovao farany momba ny fepetra takiana sy ny fameperana ho an'ireo mpitsidika tonga eto amin'ny firenena avy any ivelany.
Lisitra mena: Brezila, Afrika Atsimo, Nepal ary Sri Lanka
Fampiatoana ny sidina mivantana avy any Brezila, Afrika Atsimo, Nepal ary Sri Lanka hitohy mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Ireo mpandeha izay tonga tany amin'ireto firenena ireto tato anatin'ny 14 andro dia asaina mandefa valim-panadinana PCR ratsy dia nahatratra 72 ora farafahakeliny alohan'ny hidirany. vorontsiloza.
Izy ireo koa dia haverina karantina mandritra ny 14 andro any amin'ny toerana izay tapa-kevitry ny governemanta, ary rehefa afaka izany dia mila fitsapana ratsy indray mandeha indray. Raha misy valin'ny fitsapana tsara dia hipetraka hatrany ny marary, ary hiafara amin'ny vokatra ratsy ao anatin'ny 14 andro manaraka.
Bangladesh, India ary Pakistan
Noraisina ny lalànan'ny fitsangatsanganana ho an'i Bangladesh, India, ary Pakistan, ary ny mpandeha avy any amin'ireo firenena ireo, na ireo izay tonga tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro lasa, dia hangatahina handefa valim-panadinana PCR ratsy azo hatramin'ny 72 ora mialoha.
Ireo olona manoratra amin'ny fahazoana vaksiny roa amin'ny vaksinin'ny COVID-19 izay nahazo fankatoavana avy amin'ny World Health Organization na Torkia na ny doka iray amin'ny vaksinin'i Johnson & Johnson farafahakeliny 14 andro alohan'ny hidirany any Torkia dia ho afa-maina amin'ny quarantine.
UK, Iran, Egypt ary Singapore
Ireo mpandeha avy any Angletera, Iran, Egypt, na Singapore dia takiana mba handefa valiny ratsy avy amin'ny fitsapana PCR vita 72 ora farafahakeliny alohan'ny hidirana.
Ho an'ireo mpandeha mandeha avy any Afghanistan, ireo izay afaka manome antonta-taratasy mampiseho fa nisy vaksinin'ny COVID-19 tao anatin'ny 14 andro farany na sitrana tamin'ny aretina COVID-19 tao anatin'ny enim-bolana lasa izay dia tsy mila valim-panadinana na karantina.